एजेन्सी, ३ वैशाख । अहिले विश्वभरीका व्यवसायहरु लकडाउनको कारण धराशायी बनिरहेका छन् । तर यसबीच कोलम्बिया जस्तो पुरातन मुलुकमा भने अहिले एउटा उद्योग भने निकै फस्टाइरहेको छ । यो उद्योग हो सेक्स टोयको उद्योग । अहिले कोलम्बियामा सेक्स टोय उद्योगमा ट्रेण्डिङमा छ ।
गेर्सन मोन्जे नामका एक व्यवसायी अनलाइन सेक्स सप सञ्चालन गर्छन् । सोल्ड आउट लेखिएको रातो ब्यानर उनको पसल अगाडी गर्वका साथ फर्फराईरहको छ । क्वारेन्टाइनको चौंथो दिनदेखि उनको पसलका सामग्रीहरुको बिक्री चुलिन थालेको उनी बताउँछन् । राष्ट्रिय लकडाउनको बीचमा पनि उनी ग्राहकहरुको माग अनुसार सामग्री वितरण गर्न लागि परेका छन् । यसबीच उनको व्यापार ५० प्रतिशत नै बढेको उनी बताउँछन् ।
वेलायती समाचार संस्था रोयसर्टले कोलम्बियाका छ ओटा सेक्स सपहरुसँग कुराकानी गर्‍यो । ती सबै सेक्स सपहरुले क्वारेन्टाइन सुरु भए यता आफ्नो व्यवसाय बढेको बताएका छन् । कालम्बियामा २७ अप्रिलसम्म लकडाउन लागू गरिएको छ ।
एकजना मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डा. क्यारोलिना गुजम्यानको अनुसार आईसोलेसनको समयमा सेक्स टोयले मानिसहरुको मनोबललाई उच्च राख्न मद्दत पुर्‍याउने बताउँछिन् ।
कोलम्बिया मुलुक यौनिकताको र यसवरीपरीका विषयमा आफैमा एकदमै पुरातनवादी मुलुक हो । तर अहिले क्वारेन्टाइनको समयमा मानिसहरले यस विषयमाथिको उत्सुकतालाई मेटाउन पाएका छन् र यी बस्तुहरु प्रयोग गरेर धेरै कुरा बुझ्न पाएको डा. गुजम्यान बताउँछिन् ।
कोलम्यिबा बाहेक अन्य मुलुकमा पनि सेक्स टोयको बिक्रीमा उल्लेखनीय वृद्धि पाइएको छ । डेनमार्कमा यो दोहोरो दरमा बढेको छ । बेलायतमा पनि मार्चको अन्तिम साता सेक्स टोयको विक्रीमा २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
यस्तै मेलिडिनस्थित बाली सेक्स सपमा पनि यो बिक्री १४० प्रतिशतले बढेको छ ।
यसबीच अहिले टाढा बसेका पार्टनरहरुबीच मोबाइल फोन एप्लिकेसनको मद्दतबाट एकअर्कोको कन्ट्रोल गर्न मिल्ने सेक्स टोय एकदमै धेरै लोकप्रिय रहेको बिक्रेताहरु बताउँछन् ।